Clamshell-Style Galaxy Fold လေးကို အှနျလိုငျးမှာ တှမွေ့ငျရ | Myanmar Mobile App
Home Trending Smartphone Clamshell-Style Galaxy Fold လေးကို အှနျလိုငျးမှာ တှမွေ့ငျရ
Clamshell-Style Galaxy Fold လေးကို အှနျလိုငျးမှာ တှမွေ့ငျရ
Samsung ရဲ့ နောကျထပျခေါကျနိုငျတဲ့စမတျဖုနျးလေးကို ပွသထားတဲ့ပုံရိပျလေးတှကေတော့ Weibo ပျေါမှာ မွငျနရေပါတယျ။ Galaxy Fold ရဲ့ မြိုးဆကျသဈလေးကို ရှုစားကွပါဦး။
Ice Universe ရဲ့ ပထမဆုံးရှာဖှတှေရှေိ့မှုကွောငျ့ ဒီပုံလေးဟာ ပုံမှနျခေါကျဖုနျးရဲ့ clamshell စတိုငျလျလေးကို လကျထဲမှာထညျ့ရတာအဆငျပွအေောငျ လုပျထားတဲ့ပုံလေးဆိုတာ မွငျတှခှေ့ငျ့ရခဲ့ပါတယျ။ အိတျထောငျထဲကို ထညျ့ရလှယျတဲ့အရှယျအစားလေးပါ့။ နောကျကြောမှာတော့ ကငျမရာနှဈလုံးမွငျတှရေ့ပွီးတော့ ဒီဂဈြတယျနာရီလေးလညျး မွငျတှရေ့ပါတယျ။
Bloomberg က မတျလတုနျးက Galaxy Fold ထုတျလုပျပွီးနောကျမှာ နောကျထပျ ခေါကျနိုငျတဲ့စမတျဖုနျးမျောဒယျလျနှဈမြိုး စီစဉျနတေယျလို့ သတငျးဖွနျ့ခဲ့ပါတယျ။ တဈခုကတော့ clamshell ပုံစံ အပျေါကနေ အောကျကိုခြိုးထားတာဖွဈပွီးတော့ နောကျတဈခုက high-end အမြိုးအစားဖွဈပါတယျ။
Samsung ဟာ အောကျတိုဘာမှာတုနျးက clamshell အတှကျ concept ပုံလေးတှကေို မြှဝခေဲ့ဖူးပါတယျ။ Samsung ဆီကနေ အခကျြအလကျအသေးစိတျကို မသိရသေးပမေယျ့လညျး Bloomberg ရဲ့ ရေးသားခကျြအရဆိုရငျတော့ Galaxy Fold clamshell လေးကို ဖဖေျောဝါရီလထဲမှာ Galaxy S11 နဲ့တှဲဖကျမွငျတှရေ့နိုငျပါတယျ။
Galaxy Fold ရဲ့ မြိုးဆကျသဈလေးမှာတော့ Galaxy S11လိုပဲ ကငျမရာငါးလုံးထညျ့သှငျးထားမှာပါ။ ဒါပမေယျ့လညျး ပေါကျကွားလာတဲ့ပုံရိပျတှမှောတော့ ကငျမရာနှဈလုံးပဲ မွငျတှရေ့ပါသေးတယျ။ Samsung အနနေဲ့ flip ဖုနျးရဲ့ကြောဘကျမှာ အဲလောကျထညျ့ရတာ အဆငျမပွဘေူးလို့ မွငျနပေုံရပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။
Clamshell ပုံစံ Galaxy Fold လေးဟာ ဒျေါလာ၁၉၈၀ တနျတဲ့ အရငျမြိုးဆကျထကျတော့ ဈေးသကျသာမှာပါ။ ပွီးခဲ့တဲ့လမှာ Motorola ကလညျး Razr brand ကို ပွနျလညျအသကျသှငျးတဲ့အနနေဲ့ Android ဖုနျးတဈလုံးမိတျဆကျခဲ့ပါတယျ။ သူကတော့ ၁၄၉၉ဒျေါလာဖွဈပွီးတော့ ဇနျနဝါရီလမှာ ဖွနျ့ခြိမှာပါ။ Samsung အနနေဲ့ ဈေးခမြလား။ ဘယျလိုတှလေုပျမလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးနပေါတယျ။
Apple ကတော့ ခေါကျနိုငျတဲ့စမတျဖုနျးလုပျနတေယျလို့ မကွားမိသေးပါဘူး။ အရငျတုနျးက Apple ဟာ ခေါကျနိုငျတဲ့ display နညျးပညာတှေ patent တငျခဲ့ဖူးတာ မှတျမိနကွေမှာပါ။ နောကျပွီး Samsung က Apple ဆီကို ခေါကျနိုငျတဲ့ display နမူနာတှပွေထားတယျလို့လညျး သတငျးထှကျနသေေးတယျဆိုတော့ . . .
Samsung ရဲ့ နောက်ထပ်ခေါက်နိုင်တဲ့စမတ်ဖုန်းလေးကို ပြသထားတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကတော့ Weibo ပေါ်မှာ မြင်နေရပါတယ်။ Galaxy Fold ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်လေးကို ရှုစားကြပါဦး။
Ice Universe ရဲ့ ပထမဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကြောင့် ဒီပုံလေးဟာ ပုံမှန်ခေါက်ဖုန်းရဲ့ clamshell စတိုင်လ်လေးကို လက်ထဲမှာထည့်ရတာအဆင်ပြေအောင် လုပ်ထားတဲ့ပုံလေးဆိုတာ မြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အိတ်ထောင်ထဲကို ထည့်ရလွယ်တဲ့အရွယ်အစားလေးပါ့။ နောက်ကျောမှာတော့ ကင်မရာနှစ်လုံးမြင်တွေ့ရပြီးတော့ ဒီဂျစ်တယ်နာရီလေးလည်း မြင်တွေ့ရပါတယ်။
Bloomberg က မတ်လတုန်းက Galaxy Fold ထုတ်လုပ်ပြီးနောက်မှာ နောက်ထပ် ခေါက်နိုင်တဲ့စမတ်ဖုန်းမော်ဒယ်လ်နှစ်မျိုး စီစဉ်နေတယ်လို့ သတင်းဖြန့်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုကတော့ clamshell ပုံစံ အပေါ်ကနေ အောက်ကိုချိုးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုက high-end အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
Samsung ဟာ အောက်တိုဘာမှာတုန်းက clamshell အတွက် concept ပုံလေးတွေကို မျှဝေခဲ့ဖူးပါတယ်။ Samsung ဆီကနေ အချက်အလက်အသေးစိတ်ကို မသိရသေးပေမယ့်လည်း Bloomberg ရဲ့ ရေးသားချက်အရဆိုရင်တော့ Galaxy Fold clamshell လေးကို ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ Galaxy S11 နဲ့တွဲဖက်မြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
Galaxy Fold ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်လေးမှာတော့ Galaxy S11လိုပဲ ကင်မရာငါးလုံးထည့်သွင်းထားမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ပေါက်ကြားလာတဲ့ပုံရိပ်တွေမှာတော့ ကင်မရာနှစ်လုံးပဲ မြင်တွေ့ရပါသေးတယ်။ Samsung အနေနဲ့ flip ဖုန်းရဲ့ကျောဘက်မှာ အဲလောက်ထည့်ရတာ အဆင်မပြေဘူးလို့ မြင်နေပုံရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
Clamshell ပုံစံ Galaxy Fold လေးဟာ ဒေါ်လာ၁၉၈၀ တန်တဲ့ အရင်မျိုးဆက်ထက်တော့ ဈေးသက်သာမှာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့လမှာ Motorola ကလည်း Razr brand ကို ပြန်လည်အသက်သွင်းတဲ့အနေနဲ့ Android ဖုန်းတစ်လုံးမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့ ၁၄၉၉ဒေါ်လာဖြစ်ပြီးတော့ ဇန်န၀ါရီလမှာ ဖြန့်ချိမှာပါ။ Samsung အနေနဲ့ ဈေးချမလား။ ဘယ်လိုတွေလုပ်မလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။
Apple ကတော့ ခေါက်နိုင်တဲ့စမတ်ဖုန်းလုပ်နေတယ်လို့ မကြားမိသေးပါဘူး။ အရင်တုန်းက Apple ဟာ ခေါက်နိုင်တဲ့ display နည်းပညာတွေ patent တင်ခဲ့ဖူးတာ မှတ်မိနေကြမှာပါ။ နောက်ပြီး Samsung က Apple ဆီကို ခေါက်နိုင်တဲ့ display နမူနာတွေပြထားတယ်လ်ို့လည်း သတင်းထွက်နေသေးတယ်ဆိုတော့ . . .
Previous articleopen-source smart home စံနှုနျးတဈခုသတျမှတျဖို့ပူးပေါငျးကွမယျ့ Apple, Google
Next articlePixel3အတှကျ 120Hz LCD display စဉျးစားခဲ့တဲ့ Google